Ahoana ny fitazonana ny mpamadika mandritra ny vanim-potoana mihazakazaka
Noho ny fivoarana haingana sy ny fitomboan'ny famokarana sy ny fanodinana teknika ary ny fanatsarana miandalana ny fitaovana mekanika amin'ny sehatra maro dia mihabe hatrany hatrany ny fepetra takiana amin'ny fampitaovana azy. Tokony ho fantatra fa ny vokatry ny mpamokatra fanapahana lehibe ...
Fitandremana amin'ny fiasan'ny mpandika lalàna
Ny breaker dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina matetika amin'ny excavator. Raha te hanana ny anjara toerany amin'ny maharitra sy ho tonga fitaovana mety dia tsy maintsy ampiasaina sy tazonina tsara toy ny fitaovana hafa. Na izany aza, ny tsy firaharahana ny antsipiriany sasany sy ny asa tsy ara-dalàna mandritra ny fampiasana dia hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny lehibe ...
Ahoana ny fomba hisafidianana mpanapotika
Ny herin'ny mpandika dia ny excavator sy ny loader. Azon'izy ireo atao tsara ny manala ny tany amin'ireo vakivaky eo anelanelan'ny vato pumice sy ny vatolampy, ka amin'izany dia nilalao ny fototry ny trano izy ireo. Rehefa misafidy mpanapaka lehibe iray dia mila dinihina ireto olana manaraka ireto: 1 ...